Otu esi etinye ihe nchọgharị Tor na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Monday, December 27, 2021 Monday, August 16, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ 1 - Wụnye Tor Browser na Sid & APT Pinning
Nhọrọ 2 - Tor Browser sitere na isi iyi
Wụnye ngwugwu wget
Budata nwụnye Tor Browser na Debian 11
Mepee nwụnye Tor Browser na Debian 11
Na-ahazi Tor Browser
Ọrụ yabasị Tor
Tor, bụkwa nke a maara dị ka Na yabasị rawụta, bụ ebe mepere emepe, ngwanrọ efu na na-enyere aka nkwurịta okwu na-amaghị aha mgbe ị na-eji ọrụ ịntanetị dị ka sọfụ webụ. Netwọk Tor na-eduzi okporo ụzọ ịntanetị site na netwọk mkpuchi mkpuchi afọ ofufo zuru ụwa ọnụ nke nwere ihe karịrị puku relays isii ma na-aga n'ihu na-eto eto. Ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ụzọ ọzọ ha ga-esi dobe ozi na ihe omume ha n'amaghị ama ma ọ bụ opekata mpe dị ka o kwere mee, nke butere Tor Browser na-eto nke ọma n'afọ ndị na-adịbeghị anya ka ọ na-ezochi ọnọdụ onye ọrụ na ojiji ya n'aka onye ọ bụla na-eduzi nyocha netwọkụ ma ọ bụ nyocha okporo ụzọ. .
Netwọk Tor e bu n'obi iji chebe nzuzo nzuzo nke ndị ọrụ na nnwere onwe na ikike ha site na ịme nkwurịta okwu na-enweghị nyochaa ihe omume ha, a na-ewerekwa data na-enweghị nkwenye ha ma jiri ya chịkọta ya.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye ihe nchọgharị Tor kacha ọhụrụ na Debian 11 Bullseye.
OS akwadoro: Nnenna 11 Bullseye.
Nhọrọ kachasị mma bụ iji pinning APT ka iwu mmelite ọkọlọtọ ga-elele ya Sid (anaghị akwụsi ike) ebe nchekwa maka torbrowser-obubata mbụ ngwugwu ka ị na-edobe ngwungwu Debian 11 ndị ọzọ na ebe nchekwa dị. Nke a na-achọpụta mgbe mmelite ọ bụla pụta, ị ga-enweta ha ngwa ngwa.
Mbụ, na-eji editọ ederede, mepee/mepụta faịlụ na-esote.
Ọzọ, tinye ihe ndị a.
Na-esote, tinye ihe na-adịghị akwụsi ike (SID) ebe nchekwa.
Nke mbụ, mepee isi mmalite.list faịlụ.
Na-esote, tinye ebe nchekwa anaghị akwụsi ike na faịlụ ahụ.
Ọmụmaatụ (ahịrị abụọ ikpeazụ):
Ugbu a, chekwaa faịlụ ahụ CTRL+O, wee pụọ CTRL + X.
Melite ebe nchekwa APT iji gosipụta mgbanwe ndị ahụ.
Ọzọ, wụnye Tor Browser, mee iwu a:
Ndabere ndabere nke a ga-etinye:
Iji kwado nrụnye ahụ, gbanye ya iwu amụma apt-cache.
Ugbu a Tor Brower ga-apụta na gị Ihe omume > Gosi ngwa > Tor Browser.
Na-esote, gaba n'akụkụ nke ọzọ nke nkuzi na ịmalite na ịhazi Tor Browser.
Nhọrọ nke abụọ nke nrụnye bụ ịwụnye Tor Browser site na iji ebe nchekwa kachasị ọhụrụ sitere na ibe nbudata.
Ị ga-mkpa inwe wget arụnyere maka nkuzi a. Iji chọpụta ma ị nwere ya, jiri ihe ndị a:
Mmepụta ihe atụ ma ọ bụrụ na etinyere ya:
Site na ndabara, Debian 11 kwesịrị itinye nke a. Ọ bụrụ na-efu, jiri iwu a:
Mara, wụnye wget na-enweghị ịlele agaghị emerụkwa.
Jiri wget iwu ozugbo ị nwere njikọ .tar kacha ọhụrụ dị ka ndị a:
Mara, iwu dị n'elu bụ naanị ọmụmaatụ. Gbaa mbọ hụ na ịlele maka ụdị kachasị ọhụrụ.
Ozugbo ibudatara ebe nchekwa nwụnye, wepụ ya site na iji:
Ugbu a, jiri CD banye na ndekọ aha:
Iji malite Tor Browser na hazie nhazi nhazi, jiri iwu a:
Mara, nke a ga-amalite Tor Browser. Agbanyeghị, ịgaghị ahụ ya na menu ngwa ngosi gị. Iji wụnye akara ngosi Tor Browser, ị ga-agbakwunye -ngwa ngwa ruo na njedebe nke iwu dị ka ndị a:
Na mbido mbụ, ị ga-ahụ window dị n'okpuru:
Ọtụtụ ndị ọrụ ga-eji Jikọọ; Otú ọ dị, ntọala Tor Network nwere ike iji ntọala proxy maka mba ndị dị ka China, Egypt, na Turkey, ịkpọ aha ole na ole ebe amachibidoro iji ọrụ dị otú ahụ. Biko hụ na ị naghị emebi iwu ọ bụla site na iji nke a. Ịgafe n'ụfọdụ mba ndị a nwere ike itinye gị n'ime nnukwu nsogbu ikekwe.
N'ime nkuzi a, usoro eji eme ya bụ ijikọ ozugbo na netwọk dịka ọtụtụ ndị ọrụ ga-eme. Mgbe ị pịrị njikọ, dabere na ọnọdụ gị, ọ nwere ike were 2 ruo 10 sekọnd iji jikọọ na netwọkụ ahụ, ị ​​ga-ahụ ozi a mgbe ị na-ejikọ:
Ozugbo ejikọrọ, ị ga-enweta ibe a:
Ekele, ị jikọọ na Ngwunye Tor site n'aka gi Tor Browser.
Mgbe ị na-eji Tor Browser, kama iji webụsaịtị nkịtị, ị nwere ike họrọ iji akụkụ nke ọrụ ịntanetị nke Tor Network. Webụsaịtị ahụ, agbanyeghị, ga-adịrịrị n'ụdị a, ma ọ bụrụ na ha dị, ha na-eji a .yabasị okwu.
Maka ndị na-amaghị ọrụ yabasị, ha bụ ọrụ netwọk na-amaghị aha nke ekpughere na netwọk Tor. N'adịghị ka ọrụ ịntanetị a na-emekarị, ọrụ yabasị bụ nke nzuzo, n'ozuzu adịghị akọwapụta ya site na njin ọchụchọ, na-eji aha ngalaba na-enye onwe ya ogologo oge ma sie ike ịgụ ihe.
Ụfọdụ saịtị ama ama na-eji ọrụ .onion bụ:
Ka ịhụkwu ọrụ gaa na ibe wiki Ndepụta nke ọrụ yabasị Tor.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi ebudata Tor Browser site na isi mmalite, wụnye ma tinye akara ngosi na menu ngwa gị. Tor Browser bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ chọrọ idebe ihe omume ịntanetị ha n'aka ndị mgbasa ozi, ISPs na weebụsaịtị. Uru ọzọ nke iji Tor Browser bụ na ọ nwere ike inye aka n'ọtụtụ ọnọdụ ịnweta mgbochi mmachi na obodo ha, ndị mmadụ na-achọ izochi adreesị IP ha ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-achọghị ka omume nchọgharị ha jikọọ na ha.
Ọdịda ala nke iji Tor bụ na ọ ga-ebunye ibe ya nwayọ nwayọ karịa ọkọlọtọ ọkọlọtọ dị ka Chrome ma ọ bụ Firefox mgbe ị na-eji Tor Network, yana ọtụtụ weebụsaịtị na ọrụ weebụ na-ahọrọ igbochi ojiji Tor ka ị nwee ike ịnwe obere nchọgharị. webụ dabere n'ihe ị na-eleta ma na-eji kwa ụbọchị.
Biko mara, iji Tor ekwesịghị ịbụ ihe mkpali ma ọ bụ nhọrọ iji webụ ma ọ bụ ọrụ gbara ọchịchịrị na-emebi iwu obodo na obodo ọ bụla.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Ihe nchọgharị TOR Mail igodo
Wenezde, Nọvemba 10, 2021 1:16 nke ụtụtụ
Ihe ngwungwu torbrowser- Launcher adịghịkwa adị ọzọ.
Ọ nwere ihe na-efu m???
Zaa Meme Me
Wenezde, Nọvemba 10, 2021 2:31 nke abalị
Emelitere m nkuzi ahụ, ọ dịkwa ka ha wepụrụ ngwugwu ahụ na Bullseye. Site na ebe nchekwa, ejiri m n'aka na etinyere m ya na mbụ.
E wezụga iji flatpak ma ọ bụ snap ma ọ bụ jiri aka tinye ya bụ iji APT pinning na wụnye site na ebe nchekwa SID. Ị na-achọkarị izere nke a, mana ọ dịghị njọ maka ngwugwu dị ka TOR.
Ọ dị ugbu a na ntọhapụ kwụsiri ike nke Tor 11 ọhụrụ.
Daalụ ọzọ maka isi elu.
Mọnde, Disemba 27, 2021 6:32 nke ụtụtụ
Tinyekwara ngwugwu ahụ site na Bullseye.
Nkuzi a na-efunahụ ozi ka esi agbakwunye enweghị akwụghị ụgwọ na ndepụta isi mmalite
Mọnde, Disemba 27, 2021 8:55 nke ụtụtụ
Daalụ, Richard maka ozi ahụ.
M doziri akụkụ ahụ.